Kedu ihe dị mma na ị na-ewu ọhụrụ backlinks na ihe e kere eke na nkwalite?
Ekwenyere m na ụzọ kasị mma ị ga-esi wuo redlinks ọhụrụ zuru oke na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na-ekepụta ọdịnaya pụrụ iche nke na-enye ndị na-agụ akwụkwọ uru ahụ n'ezie. Ya mere, ịnwe ọdịnaya dị elu na ịkwalite ya n'ụzọ ziri ezi nwere ike ịbawanyewanyewanye ewu ewu n'etiti ndị na-ahụ maka ịntanetị, na-eme ka ị nwekwuo òkè, na-eduzi, ntinye, ndebanye ndebanye aha, na n'ezie, ịmepụta ndị ọhụrụ backlinks. Ihe okike di iche iche na - akwụghachi ụgwọ mgbe niile - ihe bara uru karịa nke ị nwetara, ọ ga - akacha mma ka onye ọrụ ahụ wee nwee ike ịghọta ya, ma jikọta ya niile.
Ma olee otú o si dị ize ndụ ịmepụta ndị ọhụrụ backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na ihe gbara ọkpụrụkpụ na ụfọdụ isiokwu ndị a ma ama na nke ọma? Isi ihe dị na ntinye a bụ na isi engines ọchụchọ dị ka Google n'onwe ya na-achọ ka azụlink ọ bụla metụtara ọdịnaya ahụ iji nye nkọwa. Ọ pụtara na ndị dị otú ahụ backlinks kwesịrị edetu edezi site n'akụkụ nke njikọ nke atọ ọzọ. Na nkenke, njikọ niile na-ewu na-akpaghị aka (ya bụ, enweghị ezigbo nchịkọta akụkọ) dị njọ (ma ọ bụghị, ndị dị ala) site na nyocha nke search engine Google. N'ezie, "nkọwa" a na-akọwawanye, ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Ya mere, ka anyị chee ya ihu - ịkwado maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ atụmatụ ezubere iche iji nweta ọtụtụ backlinks dịka o kwere mee ọ ga-abụ na ị gaghị eme ihe, nke enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme na nchebe gị pụọ na nhụjuanya dị elu nke Google.
Ya mere, ọ bụrụ na a nakweere ma ọ bụrụ na ọ dị mma iji wuo ọhụrụ backlinks na ọdịnaya n'okpuru nchịkọta akụkọ, ebe a bụ ụzọ bụ isi nke mmepụta ihe na nkwalite iji mee maka ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị. Aga m emepe nhọrọ nchịkọta doro anya (dị ka ajụjụ ọnụ, infographics, njikọ ụgha, wdg) iji gosipụta gị ụzọ ndị ọzọ nke ịmepụta redlink ọhụrụ na ọdịnaya. Ha chọrọ ntakịrị nkọwa banyere ihe mere ha ji dị mma n'anya Google. Ya mere, ka anyi mee ngwa ngwa na ha.
Nchịkọta ndị ọbịa - nke mbụ, saịtị ntanetị ma ọ bụ blog nwere nhọrọ nke aka ya ịnakwere ma ọ bụ ghara ịtụle onyinye gị niile . Ma, n'ezie, a ghaghị inwe nchịkọta akwụkwọ nchịkọta akụkọ maka ihe ọhụrụ ọ bụla dị na azụmokwu ndị bipụtara na nso nso a ma ọ bụ posts blog.
Ndenye akwụkwọ - ido onwe ha n'okpuru akwụkwọ ndekọ ndị nyochaa ntinye niile ga-adị mma mgbe ha na-akwado njikwa ederede (ma ọ bụrụhaala na ha na-ajụ saịtị na blọọgụ niile dị ala).
Pịa akwụkwọ akụkọ na Resources Media - ịmekọrịta ha dị mma ọ bụrụ na ha na-ebute mbipụta ugboro ugboro maka naanị akụkọ kwesịrị ekwesị na ihe ọ bụla ọzọ. Naanị cheta, ụdị ebe nrụọrụ weebụ a ka a ga-ekesa, ọ bụghị maka njikọ mbụ n'onwe ya.
Blog Comments - na-atụle na nhọrọ nchịkọta na-abụkarị na blogger, nanị ọnụọgụgụ nke blọọgụ tụkwasịrị obi ga-adị mma iji wuo ọhụrụ backlinks na ụfọdụ n'ezie nghọta na elu-mma ekwu.
Njikọ ndị metụtara, Mpaghara Niche, na Ajụjụ saịtị - ga-abụ ebe nchekwa dị mma maka njikọ njikọ yana ihe e kere eke na nkwalite. Naanị n'ihi na ndị na-eme ihe ngosi ga-ehichapụ spam ọ bụla na mkpirikpi oge ma ọ bụ na mpaghara obodo anaghị emetụta ya Source .